မိုဇမ်ဘစ် | ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > မိုဇမ်ဘစ်
Matemo ကျွန်း Resort ကို
နီးပါးမတော်တဆမှုအားဖြင့်သာငါ Vamizi ကျွန်း Lodge မှာငါ့အအိပ်မက်ငါးဖမ်းအားလပ်ရက် packages များထဲကတစ်ခုတွေ့ရှိရ, အဆိုပါ Quirimba Archipeligo မိုဇမ်ဘစ်အတွက် Maluane ကျွန်းပေါ်. ငါသည်လည်းဤ Eco Lodge စွန့်စားမှုအားလပ်ရက်ဖြစ်ပါတယ်ထုတ်တွေ့ရှိရ, ဒါပေမယ့်တကရင်ခုန်စရာတတ်နိုင်ပျားရည်ဆမ်းခရီးစိတ်ကူးငါ၏စိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်, အခြားဧည့်သည်များအဖြစ်အများအပြားပျားရည်ဆမ်းခရီးခဲ့ကြသည်. တစ်ခုသို့မဟုတ်သူတို့ကိုနှစ်ခုပဲဝေးလံသောကျွန်းအားလပ်ရက်များ၏စိတ်ကူးကိုချစ်, နှင့်တကယ်တော့ဒီနီးပါးတနေစဉ်အတွင်းနွေးသောရာသီဥတုများအတွက်စံပြပျားရည်ဆမ်းခရီးခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ် ...
တောင်အာဖရိကမှာ Holidaying: ဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်, ကိပ်တောင်းနှင့်ဒါဗန်မြို့တွင်
သငျသညျ Marlin Lodge Benguerra ကျွန်းကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့အခါ, Bazaruto ကျွန်းစု, မိုဇမ်ဘစ်, သငျသညျကိုပြောပြသူကိုသတိထားပါ, လူအများစုနေဆဲကမလုံခြုံသည်ထင်သောကြောင့်,, နှင့်မိုဇမ်ဘစ်အကြောင်းကိုမှာအားလုံးဘာမှသိကြတဲ့သူတွေကိုရိုးရာဖြစ်ကောင်းနောက်တဖန်သင်နှင့်နှုတ်ဆက်ခြင်းငှါဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်. သငျသညျ Vilanculos သို့ပျံသန်း, ဝံပိုငှက် Air လေကြောင်းလိုင်းနှင့်အတူဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်ကနေနှစျနာရီခနျ့ထားတဲ့ဖြစ်ပါသည်, နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေယာဉ်ခရီးစဉ်အပေါ်ဥရောပကနေကြွလာတော်လေယာဉ်ခရီးစဉ်အချိန်များတိုက်ဆိုင်မှဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. Marlin Lodge မှလှေ ...
ဂရိဟိုတယ် – အ Med အတွက်နေအိမ်
10 ရိုမန်းတစ်ပျားရည်ဆမ်းခရီး & အားလပ်ရက်အပန်းဖြေနေရာတခု